Sawirada Calan saarkii Itoobiya ka eeg halkan
Meles Zenawi oo Muujiyey in uu Xukunka Ka Degayo Laba Sano Gudahood...
:: Ra'iisul wasaaraha xukuumada Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday sida uu damacsan yahay in uu xukunka dalkaas ka dego inta aan la gaarin laba sano. Waxa uu sidaas ku sheegay waraysi uu siiyey Jonathan Dimbleby oo ah weriye aad looga yaqaan dalka Ingriiska, waraysiga oo May 29, 2007 lagu baahiyey warbaahinta.
:: Waxa kale oo waraysigaas uu Meles Zenawi markale ku caddeeyey in sababta ay Soomaaliya u galeen ay ahayd arrimo iyaga (Ethiopia) ammaankooda ay ku xejisanayeen, sababtaas awgeedna ay Muqdisho uga saareen Maxkamadaha Islaamiga ah, taas oo uu kaga jawaabayey su'aal la xiriirta in dhaqaalaha Itoobiya ay la degayaan ciidamadooda ku sugan Soomaaliya, ayuu intaas ku daray in markii ay maxkamada saareen ay ciidankooda la bexeen in kabadan 65%, oo aysan ciidan dambe u dirayn Soomaaliya, taas oo weriyuhu inta uu hadalkaas la yaabay weydiiyey in uu taas ku adkaysanayo ayaa Zenawi ugu jawaabey waa hubaa in aanaan ciidamo dambe u dirayn Soomaaliya, markaasna uu weriyuhu yiri "arrintani waa mid aad u xiiso badan". [Laakiin wasiirkiisa Arrimaha Dibadda, Seyoum Mesfin, ayaa May 29, 2007 sheegay in ciidamada Itoobiya aysan ka bixi doonin Soomaaliya].
:: Waxa kale oo Zenawi uu afku ka xaday in ay jiraan nidaam lagu bedeli karo xuduudaha Ethiopia, laakiin arrintaas faahfaahin kama uusan bixin waxa uu ula jeedey. Waraysigaas qaar ka mid ah halkan ka dhegeyso....
Video: Waraysigaas oo dhamaystiran halkan ka daawo
TAARIIKHDA CALANKA SOOMAALIDA... GUJI...
Ethiopia: Soomaaliya waxaan kula jirnaa Dagaal - 05 December 2006
Bereket Simon, advisor to Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi, said on 05 December 2006 �Technically, we are war with Somalia. Everybody knows it is them who declared jihad on Ethiopia. So technically speaking, we are at war with them based on their declaration of war. Now, we have asserted our rights to defend ourselves,�...[VOA]
Listen to Butty interview with Bereket Simon
Dalalka Afrika waxay soo mareen xilli ay hoos galeen gumeystayaashii reer Yurub, arrintaas Itoobiya kama badbaadin, waxayna ahayd Talyaaniga dawladdii Itoobiya gumeysiga ku haysatey muddo shan sano ah (1936-1941). Dad badan ayaa is weydiiya: Maxaa loo yiraahdaa Itoobiya waa dalka keliya ee aan Afrika laga gumeysan. Arrintaas xeeldheerayaal Soomaaliyeed waxay kaga jawaabeen: Gumeystayaashii reer Yurub waxay db u gocdeen warqad uu Boqor Menelek u diray dawladaha reer Yurub 1891, warqaddaas oo Muujisay in "markii quwadihii Masiixiyiintu ay u soo hiilin waayeen Itoobiya in xeebta ay ka qabsadeen Muslimiin". Taas ayaa loo malaynayaa in ay dhalisay in Itoobiya lagu abaal mariyey laba arrimood oo ah: In la siiyo dhul Muslimiintu leeyihiin si ay gumeysto, iyo in aan taariikhda buugaagta reer Yurub lagu qorin in la Itoobiya uu Talyaanigu gumeystey, oo marka laga hadlayo xilligii uu Talyaanigu Gumeystey Itoobiya ee shanta sano ahayd in la yiraahdo waa: shan sano oo militari faashiiste ah haystey Itoobiya. Sababtaas ayaa keenta in buugaagta Itoobiya lagu qoro, haddiiba la qoro taraiikhdaas, sidan: "five-year military occupation of Ethiopia by fascists". Taas oo lagu xoojiyo oraahda ah: Itoobiya waxay ku faraxsan tahay in ay tahay dalka keliya ee Afrika ee aan la gumeysan: "Ethiopia proudly claims to be 'the only African country that has never been colonized'". Halkii xaqiiqada laga qori lahaa: Ethiopia was colonized by Italy for five years (1936-1941) - ama (Italy colonized Ethiopia for five years).
Madaxweynaha dalka Masar, Hosni Mubarak, ayaa yiri "waan fahmi karaa sababta ay Itoobiya ugu duushey Soomaaliya". Waxa uu hadalkaas yiri maalin Khamiis ah, Janaayo 4, 2007, mar uu magaalada xeebta ah badda cas ku taal ee Sharm el-Sheikh ee Masar kula kulmay wasiirka Arrimaha dibada ee Itoobiya Seyoum Mesfin, isla mar ahaantaasna dhambaal ka helay ra'iisul wasaaraha Itoobiya la sheegay in ay ku qornayn warbixin uu Zenawi kagahadlay xaladda ku soo siyaadey Soomaaliya. Jariidada ka soo baxda Shiinaha ee Xinhua oo arrintaas ka hadleysey waxay qortay cinwaanka: "Mubarak expresses understanding on Ethiopian intervention in Somalia". Haddaba xeel dheerayaasha Soomaaliyeed waxay muujiyeen sababta uu Mubaarak hadalkaas u yiri in ay salka ku hayso biyaha webiga Niilka.
Waxaa jira heshiis sannadkii 1929 dhex maray dalka Masar iyo Boqortooyadii Ingriiska (oo ku hadleysey codka Sudan maadaama ay xilligaas gumaysaneysey), heshiiskaas oo loo yaqaan "1929 Nile Treaty" waxa uu dalka Masar siinayey xusuuqda ugu badan ee adeegsiga biyaha webiga Nile. Waxaana heshiiskaas markale dib loo eegay sannadkii 1959 (waxaana sidaas dalbatay Sudan). Heshiisyadaas wax tixgelin ah lama siin Ethiopia oo qiyaastii ilaa 80% biyaha webiga Blue Nile ay ka soo bilowdaan [Webiga Niil ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalka Masar waxa biyihiisu ka yimaadaan labada webi ee Niilka Cad "White Nile" oo ka soo bilowda Harada Victoria ee ay wadaagaan Kenya, Tanzania iyo Uganda, iyo Webiga Niilka Buluugga "Blue Nile" oo kasoo bilowda Haarata "Lake Tana" oo ku taal Ethiopia, waxaana webigaas dhanka Ethiopia looga yaqaan "Abay" ama "Giyon". Labada webi ee Niilka-Cad iyo Niilka-Buluuga waxay ku kulmaan bartamaha magalada Khartuum ee dalka Suudaan, markaas ayey noqdaan Niilka waraabiya beeraha dalka Masar oo ay dagaalka ka xigto haddii biyahaas ay Ethiopia ka faa'iidaysato iyadoo aan Masar lagala tashan ]. Sidaas darteed Ethiopia looma ogola in ay mashaariic horumarin ah ka fuliso Webiga Blue Nile ee dalkeeda ka soo bilowda, haddii ay sidaas samayso dalalka Sudan iyo Masar ayaa soo weeraraya Ethiopia oo ah dalal aad u xoog weyn. Markaas waa in Itoobiya hesho meel kale oo ay horumar ku samayso si ay dadkeeda oo hadda kor u dhaafay 75 million u helaan cunto ku filan. Haddaba meesha ugu dhow ayaa noqotay dhulka baaxadda weyn ee Soomaaliya maadaama tirada Soomaalidu ay yihiin 9 million oo keliya ayna haystaan dhul ballaaran oo ay maraan Webiyada Jubba iyo Shabeelle iyo xeeb aad u dheer, sidaasna dadka tirada badan ee reer Itoobiya la soo dejiyo dhulkaas barwaaqada ah.
Golaha Ammaanku Wuxuu Cambaareynayaa �Qulqulka Hubka ee sida weyn uga socda dalka Somalia... Akhri